Ogaden News Agency (ONA) – Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybtii 3aad- By: Xaaji M/rashiid.
Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybtii 3aad- By: Xaaji M/rashiid.
Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybtii 3aad- By: Xaaji M/rashiid
Sidaad lasocoteen waxaynu kujirnaa qaybtii sadexaad ee silsilada dahabiga waana mawduuc aan isleeyahay wuxuu istaahilaa in marar badan laga hadlo. Waxaan ku soo qaadan doonaa maanta Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ee lagu soo gaabiyo JWXO oo ah tiir dhexaadka halganka lagu xoreynayo Dalka. Marka hore waxaan u gudbinaya Naska Quraanka ee ah واعتصموا بالله هولاكم فنعم المولى ونعم النصير suuratu xajj aayadda 78aad taasoo micnaheedu yahay Allewayne cuskada, waa Sayidka ugu fiican, waana gargaaraha ugu fiicane.
Ka hor intaana qoraalka sii dhexgalin akhristoow waxaa inoo wada wanaagsan inaynu wax dheeraad ah kabarano wadanka ogadenya ee jabhadda wadaniga xoreynta ogadenya ay guntiga ugaabsatay isla markaana ay diiday inay ku raaxaystaan soo duulayaashu. Waxaad ogaandoontaa qiimaha dhulka adigoo dhanka kalana ugaraabaya halyeeyada JWXO ee timaha raameeyay.
Hadaan marka hore yara sharraxo Dalka ogadenya wuxuu dhacaa badhtamaha Geeska Afrika wuxuuna udhaxeeyaa wadamada dalalka DJabuti, Somalia, Kenya iyo Itoobiya. Wadanku wuxuu caan kuyahay Goobo shidaalku ceegaago, hadaynu soo qaadano meelaha ugu caansan- waa jeexdin, Higlaaley, Canomadhax, Kalub iyo Cobole.
Ceelasha biyaha caadiga laga cabo, isla markaana dabeeciga waxaa ugu caansan kuwa la isku dhaho 7 Doolo oo kala ah Walwaal, Garloogubay, Gaafdhuug, Yucub, Wardheer, Uubataale, Afyraado. Hiiliye, Candhofidiye, Bulaale, Shiniile, Habeed, Dhoobaale, Carmaale, Hadhaawe, Banfarowle, Dal-lahey,Sulul, iyo ceelal kale oo badan.
Dhulka dalxiiska ku haboon ee Ogadenya.
Waxaa kale oo ilaahay ku manaystay ogadenya waa wabiyada oo afar ah waxayna kala yihiin Shabeele, Genale, Dawa iyo Weeb. Sidoo kale wuxuu ilaahay dalkaas ugu deeqay Togaga waxaana kamid ah Erar, Jarar, Daakhato iyo Faafan. Wuxuu sidoo kale dalku leeyahay Goobo dalxiiska ku wanaagsan waxaana kamid ah- 1- Babili rock valley.2- The Karamada mountain.3- The desert landscape and vegetation.5- Natural hot springs, Forest resources.6- Rivers.7- Wildlife and conservation areas and banka qorahay etc.
Laagaha kadhexdaaca Ogadenya.
Waxaa kamid ah Laagaha ilaahay ugu deeqay Ogadenya- Bawa, Ooman, waaldigayso, Garaac, Bodaleey, Samane, Cusboley, Tarfa,Lammu, Xamaro Macaan iyo kuwo kale. Xigasho- waxaan dhamaan magacyada Goobaha aan soo sheegay diyaariyay 2015kii, Liibaan Miyir Abdi (kulmiye). Hadaan intaa ku dhaafo astaamaha waawayn ee uu dhulka ogadenya caanka kuyahay waxaan sii gudegalayaa qoraalka qeybtiisa kale oo ah kalimad ku socota ciidanka xoreynta dalka sida xaqdarrada ah ugu jira gacanta guumaystaha itoobiya.
Halganka uu gadhwadeenka kayahay Ururku wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Sida la ogyahay wuxuu ciidanku ka hawlgalaa dhulka hayjada ah iyo shacabka dhexdiisa. Duruufaha ay la kulmaan Naftood,hurayaashu waxaa mararka qaar sabab u ah is badalka cimilada oo mar abaaro ku dhuftaan dalka, marna cudurro lagu siidaayo. Dhanka kale mararka qaar waa barwaaqo iyo naxarrista Eebe oo dalka wada gaadha. Arimahaasi waxay saameeyaan Naftii huraha, balse waxaan filayaa inay tahay nin tuur leh tabuu u seexdo isagaa yaqaana.
Waxaa kale oo kamid ah duruufaha qalfsan ee ciidanka soo maray iyagoo quudareeya dadka u nasab sheegta jamhuriyadda soomaaliya waxayna socoto kumaraan Gobolada kala duwan ee ku teedsan xuduuda. Waxaa marar badan dhacda inay kala kulmaan dhacdooyin ugub ah oo ku cusub taariikhda soomaalida taasoo ah in cadowgii hoosta looga baaqo uu sidaa lagu shirqqolo. Mararka qaarna waxaa dhacda in la qabto halgamaaga masaafurka ah isla markaana lagu wareejiyo cadowgii itoobiya ee soo jireenka ahaa! Socdaalka naftood,hurayaasha ee soomaaliya wuxuu noqon karaa mid dhanka caafimaadka la xidhiidha ama in xaas iyo caruur kajoogaan soomaaliya. Si kasataba ha ahaatee halgankii ku dhisnaa isku tashigu ma istaagin dariiqiisiina lagama leexinin.
Markii laga yimaado dhanka duruufaha waxaa Ciidanka jwxo la dagaalamay Quwado shisheeye oo biyaha umukhuurtay kuwaasoo hurgufayay malaayiin lacago ah oo guumaystaha ay ku caawinayeen, balse jabhaddu ay si wanaagsan ula socotay dhaqdhaqaaqooda. Qaar kamid ah hagardaamada shisheeyaha way fashiliyeen, kuwo kalana waxaa dhici karta inay dib ujoogsadeen markay arkeen wax gaadhay saxiibadood.
Waxaan wali kujira Qormadii Silsiladda dahabiga ee la baxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya”. Sideedaba waxaa Dunida loo joogaa imtixaan cidii ku baastana waxay leedahay abaal marin, cidii kudhacdana adiguba waa iska garan wuxuu xaalkeedu noqon karo!. Sidaa daraadeed duruufaha siyaasiga iyo kuwa khaaska ah ee asiibaya Naftii hurayaasha waa wada imtixaan wayse ku baaseen aragtidayda.
Waxaynu nahay insaan oo waxaa dhici karta inuu Shaqsi halgamaa ahaan jiray iska yara caajiso ama uu wax tawdo oo qalbigiisa isbadal kuyimaado. Waxaa kale oo dhici karta inuu dhaawac soo gaadho sidaana uu hawlgab ku noqdo. Arimahaas iyo kuwo kale oo lasoo darsi kara halgamaaga waxaan kaleeyahay- walaal Rabi hakuu boogo dhayo adigoo xaaladaas kujirana is Garabtaag xoreynta ogadenya, waayo waa sida kaliya eed xuquuqdaa ku heli karto hadii lagu oofsadana waxaa heli doona maatida aad katagto oo aan la ilaawi karin.
Qadiyadda ogadenya xaqnimadeeda waxaa ka hadlay Culimada soomaalida kuwooda rabaaniyiinta ah, isla markaana daacadda ah. Markay qadiyadda cadeeyeen kadib waxay ubaaqeen umadda soomaliyeed dhamaanteed. Nuxurka hadalkoodu wuxuu ahaa is Garab taag xoreynta Ogadenya waana weedha aan lafteydu asbuucyadan oo dhan ku dhawaaqayo. Hala yaabin- waa mid jirta in Ehlu xaqu isku meel wax ka arko sabankuu doonaba ha joogee!.
Anigoo ku dhow dhameystirka Qormada waxaan Jabhadda ka eegayaa dhanka rooxaaniyada oo ah dhismaha nafta iyo sida ay Rabigeed ugu xidhantahay. Awalba waanu lasoconay inay yihiin jamaaco ilaahay talo saaratay oo baryadiisa cuskada. Dadka noocaas ku sifooba wuxuu ilaahay SWTC ka muujiyaa karaamooyin waana meesha ay soomaalidu ka yidhaahaan hebel waa awliyo, balse qasab ma aha in ruux walba karaamo laga arko xataa haduu wanaagsanyahay.
Ciidanka Xaq udirirka JWXO waxaa kusoo badanaya karaamooyin uu ilaahay ka muujiyay sida ay faafinayeen bulshada qaarkeed, kadibna ay saxaafadda usoo gudbiyeen. Waxaa la arkay rag jabahadda kamid ah oo ay carradu ka xishootay inay cunto waana daliil cad oo wax lagu tusayo inta halganka xaqnimadiisa ka shakisan. Arinka ah inay karaamo kadaahirto Muslim xaq udirir ah waa mid horay loo arki jiray inta uu kaasi jirana way sii socon,doontaa. Waxaa kamid ah karaamooyinka, in xaq udirirka baryadiisa la aqbalo, waxaanse isleeyahay Qisooyin badan ayaa soo bixi doona kolkii halganka laga faraxasho.
Guud ahaan ciidanka naftood hurayaasha iyo warka kusaabsan wax warqad lagu soo kobo kawayn, dadkuna abaal wayn bay uhayaan, markii laga reebo hal Ruux. Markaan sheego inay cid waliba ku qanci doonto waa mid aan filayo. Shaqsiga kaliya een kollaba dadwaynuhu cafin doonin waa ninka kasoo dhexbaxa naftood,hurayaasha, kadibna si iskii ah ugu biira safka Woyaanaha iyo maleeshiyada Abdi Ilay oo shacabka sidaa ku xasuuqa, isla markaana faafiya dhamaan sirihii halganka isagoo darajo ku raadsanaya.
Markii laga yimaado taariikhaha hore waxaa la gaadhay guul mar haduuna jirin magac mooyee wax muuq ah oo itoobiya layidhaaho. Waxaa loo kala fadhiyaa koox kooxo, Gobol Gobol iyo Qabiil Qabiil. Xikmadaha cusub ee waawayn ee madaxda halganka waxaa ka mid ah- Hadaad Woyaanoow Soomaaliya noo dhexgasheen anaguna itoobiyaanu idiin dhexgalay. Hadaba ariintu hadal iyo goodis way soo dhaafatay, caalsaarahana waxaa wata Jabhada Xoreynta Ogadenya ee isha ku haya!.